Amboo !! Kaayyoo warra EZEMA /Minilkootaa /Paartii haaraa Badhaadhinaa Abiy Ahimadiin oromiyaa diiguuf deemuu Hin fudhannu. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAmboo !! Kaayyoo warra EZEMA /Minilkootaa /Paartii haaraa Badhaadhinaa Abiy Ahimadiin oromiyaa diiguuf deemuu Hin fudhannu.
Amboo !! Kaayyoo warra EZEMA /Minilkootaa /Paartii haaraa Badhaadhinaa Abiy Ahimadiin oromiyaa diiguuf deemuu Hin fudhannu,Hin Filanne.
Diina oromoo ti.
Gonkuma oromiyaa irratti hojii irra Hin oolu.Dura dhaabbanna.
1. Oromoon falaasama qaba. Falasamnisaas saboonumma dha
2. Oromoon paartii haaraa hin fedhu. Partii gahaa qaba
3. Oromoon kayyoo haraa hin barbaachisuun. Kayyoon isa Oromumma dha.
4. Oromoon hoggansa ODP hin barbaaduu. Hoggansii jiru nugaha.
Kanaaf kkf qabannee Hoggantoota keenya sirreefanne deggerree qabsootii qophoofna.
Tokkummaa Gaaddisa hooggansa oromoo (GHO) jalatti hiriirree bilisummaa oromoo galmaan Ni geenya.
Defamation team against Lemmaa Magarsaa is already established this morning.
Fake documantary is being prepared. Few Bilxiginna facebook activists have started the propaganda against this giant personality. Uummanni keenya kana beekee olola jaraa irraa of haa eegu.
Walgahii KHR ADWUI kan yeroo dabree sana akka waan Lammaa Magarsaan marii’atee raggaasisetti ololamaa jira. Kan inni harka baase sun ajandaa marii mirkaneessuu irratti. Inni ajandaa sana irratti hin marii’anne. Hin raggaasifnesi. Ganamuma sana biyya alaa deeme. Walgahii guyyaa sadanii KHR irra hin turre inni. Walgahii Mana Marii ADWUI irratti ammoo tasumaa hin argamne. Olola sobaa dhaabui qabu warri oduu sobaa kana gadhiisaa jiran.
Bilxiginna party Oromia kilil ፅ/ቤት waltajjii hatattamaa akka waamu ajajni waannaa ፅ/ቤት irraa darbeefiira. Hirmaattonni waltajjii kanaa miseensotaa fi hoggansa ODP duraanii ta’uun barameera. Ajandaan waltajjichaa ammoo akka Lammaa Magarsaa balaaleffatanii fi bixiginnaa paartii deeggaran akka ta’e odeessi waajjira paartii olaanaa bilxiginnaa irraa ganama kana murtaa’ee nu gahe ni addeessa. Godinaalee fi magaalota hunda irrattis mariin farra-lammaa (farra-lammummaa) akka taasifamu murtaa’eera.
Miseensonni ODP duraanii hundi wanti beekuu qaban:
1) Namoota isaan mariisisuu dhufaniin isin ODP moo bilxiginnaa dha jedhanii gaafachuu qabu.
2) Miseensonni ODP hundii fi caasaan paartii ODP seelii hanga hundee irratti utuu hin marii’atiin utuu waan sagantaa paartichaa, dambii isaa fi fedhii miseensotaa hin beekiin gubbaatti nama tokkoon murtaa’ee anatu siif beekaa fudhuu nurraa haa dhaabbatu jechuu qaba. Uummanni Oromoo, deeggartoonni ODP fi miseensonni ODP hundi baree irrattiwaliif galuu qaba.
3) Lammaa Magarsaa nama miseensa hunda gabrummaa wayyaanee jalaa baase akkamitti alatti dhiibdanii kana hunda gootan nuuf ibsaa jedhaanii.
4) Lammaa Magarsaa waliin namni waliif hin galle dhuguma hoggansa Oromoo waliin waliif galaa Dr Abiyyi. Ni shakkina.
5) Lammaa Magarsaatu Oromoo bulchuu qaba jedhaa warra olola Lammaa irratti oofuuf deemtu salphisaa ari’aaofirraa.
6) Jiraattonni naannoo Oromiyaa hundi shira nafxenyaa kana akka hin fudhanne, didaa. Paartiin dhimma Oromoo lagatee oromoo fayyadu hin jiru.
EGEREE: Hiriyyaan waliin dhaabbanne egereen keenya maal akka ta’u raagaa laaata?
Kunoo dabballee Badhaadhummaa dubbis
Falaasamni “Ida’amuu”, jettu Itophiyaa afaan, aadaafi alaabaa limmuxxii fiduu akka taate pirezidantichi naannoo Amaaraa Ameeriikaatti ifa godhe.
Kunoo YEROON Geesse!
Amaarri dhaadachaa jirti
Mootummoota dhiheenyatti addunyaa keessatti beekamuuf jiran:Oromiyaa; Sidaamaa; Tigiraay